घर युरोपियन स्टार लियोनार्डो बोक्ची बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
एलबीले फुल स्टोरीको फुटबल प्रतिभाशाली प्रस्तुत गर्दछ उपनाम "Bonnibauer"। हाम्रो लियोनार्डो बोक्ची बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पुरा खातालाई तपाईंको बचपनको मिति सम्म ल्याउँछ। विश्लेषणमा उहाँका बारेमा प्रसिद्धि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सम्बन्ध जीवन, र धेरै अन्य बन्द-पिच तथ्याङ्कहरू (सानो चिन्ता) भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो लम्बाई-दायरा पासिंग कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको बारेमा जान्दछ तर लियोनार्डो बोक्कीको जैवमा मात्र केहि रोचक छ। अब अगाडी बढो बिना, सुरु गरौं।
Leonardo Bonucci Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -प्रारम्भिक र पारिवारिक जीवन
सुरू गर्दै, Leonardo Bonucci 1 मा जन्मिएको थियोst मई 1987 को विटब्रू, इटाली मा दिन। उनी आफ्नो बुबा क्लाउड बोक्ची (एक व्यवसायीसँग प्यानल बिक्री गर्न चासो राखेर) र तिनको आमा डोराता बोन्सीमा जन्मिएका थिए।
Pianoscarano (एक पड़ोसी शहर बोन्सीको जन्मस्थान स्थान) मा बढ्दै जान्छ जुन यसको मध्ययुगीन आर्किटेक्चरको लागि उत्तम छ, युवा र मोटो बोनसले फुटबलमा प्रारम्भिक रुचि विकास गर्यो।
यो लियोनार्कोको परिवारले लामो समयसम्म यो सम्भव नभएको थिएन कि उनीहरूले गृहनगरको पियानोसोरोन टीममा पूर्ण रूपमा नामांकन गरेको खेलको लागि उनको जुनून पर्याप्त मैदानको लागि दिएका थिए जहाँ उनले केवल धेरै निविदा उमेरमा प्रतिस्पर्धात्मक फुटबल खेल्न नसक्ने तर अझ राम्रो काम गरे। तिनको बचपन।
लियोनार्डो बोक्ची बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-स्पोर्टिङ भाइहरू
फुटबलको लागि बोक्चीको प्रेम उनको परिवारको विशेष रूपमा क्वाडियो स्टुडियो (उनको फुटबल उत्साहजनक पिता) र उनको बुबा, रिकोकार्डो (बोक्ची सँग तल चित्रित) प्रभावित भएको थियो जसले सेरी C1 मा सेटिबेससँग केन्द्रीय डिफेंडरको स्तर फुटबल खेलेको थियो।
युवा बोक्चीलाई उनीहरूको गृहनगरको टोलीमा उनीहरूको खुट्टा फेला पार्न मद्दतको लागि Riccardo योगदानहरू बढावा दिन सक्दैनन्। ब्युईसीबाट बचायतका अलावा, रिकोकार्डोले पनि खेलकुद र प्रशिक्षण गर्नुअघि उनको बच्चा भाइ साफ किटहरूमा देखा पर्न पनि सकेन।
लियोनार्डो बोक्ची बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ आमाबाबु तथ्य-भित्री आमाबाबु
अन्तिम आमाबाबुको जन्म भएको बेला, बोक्सीले हरेक परिवारको सबै भन्दा सानो सदस्यलाई मायालु प्रेम र सम्बन्धित फाईदाहरूमा कहिल्यै सम्झन सकेन। तिनका आमाबाबुले आफ्ना उत्साहलाई मुक्त मुक्ति दिए, जसमा आफ्ना मनपर्ने भोजनहरू उपलब्ध गराउन र उहाँलाई गस्टो संग खाने देख्नुहुन्छ !.
Leonardo Bonucci Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
बोक्सीले आफ्नो पड़ोस टोलीलाई विटब्रिसको अन्तर्गत 15 दबाबको साथ क्लब फुटबलमा खेल्न शुरु गरे जब उनी 13 वर्षको उमेरमा र 2004 सम्म क्लबमा बसे।
धेरै पछि, बोक्सी 2005 मा इंटर मिलन मा शामिल भए जहाँ उनले क्लब को युवा रैंक्स को माध्यम ले गुजरात को इंटर यूएक्सएनमिक्स टीम को सदस्य बन्यो र राष्ट्रीय युवा लीग को खिताब जीता। पछि जवान फुटबल प्रयास गरे कि बोक्की ट्रेविसो, पिसा र बारीमा जानुभएको छ जहाँ उनले कम प्राप्त गरे सम्म सम्म उनले 20 मा जर्ननस को लागि एक कदम सुरक्षित गरेst जुलाई 2010।
यो जूउभस मा थियो कि बोनीकी 3-5-2 गठन को तहत एक योग्य तीन तीन मान्छे को रक्षा गर्न को लागि ब्राजीलहरु ब्राजीलली र चीएलीनी संग जोडीएको थियो। ट्रो उपनाम कमाईयो बीबीसी, (आफ्नो सम्बन्धित प्रारम्भिक देखि लिया) र एक साथ, सर्वश्रेष्ठ रक्षा को एक स्थापित, क्लब र बोनीकी उनको पहिलो प्रमुख शीर्षक क्लिनिक, 2011 - 12 Scudetto, साथ नै उनलाई उसलाई फाइनलमा एक स्थान कमाई UEFA यूरो 2012 squad। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
Leonardo Bonucci Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
Bonucci केहि पेशेवर फुटबलर मध्ये एक छ, जसले जान्छ कि कसरि फुटबल स्ट्याडिया को बिरुद्ध बाहिर प्यार र प्यार राखन। यो बताउँछ किनकि उनी अझै आफ्नो लामो समयको प्रेमिका र मोडेल मार्टिन मार्केसी म्याकारीसँग सम्बन्ध रहेको छ, जसलाई उनले धेरै वर्ष पहिले भेट्थे।
जो जोडी जून 2011 मा विवाह भयो, एक बंधन को सील कि केवल वर्षहरु मा केवल मजबूत भयो।
तिनीहरूको संघ दुई छोराहरूसँग आशिष् दिइन्छ; Lorenzo (जुलाई 2012 मा जन्मे) र Matteo, (मई 2014 मा जन्मे)। दुवै छोराछोरीलाई आमाबाबुको मनमोहक छ जसले उनीहरूलाई कसरी सँभालो छ भन्ने प्रमाणित गर्न मौका पाएनन्।
Leonardo Bonucci Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -लगभग क्विस्टेड फुटबल
बोन्कीले आफ्नो फुटबल क्यामेराको सबैभन्दा डरलाग्दो क्षण थियो जब उनको सबैभन्दा सानो पुत्र, म्याटिटोले एक गंभीर बीमारीहरू (हर्निया) जुन जुलाई 2016 मा आपातकालीन सर्जरीको आवश्यक थियो।
यो अवधि बोक्की को लागि एकदम दुखद एक थियो किनकी उनले शायद नै ध्यान केंद्रित गर्न सक्छन् या केहि केहि सोचा, तर उनको छोरा को त्वरित रिकवरी। सर्जरी पछि महिना, बोक्सीले एल पाइससँग साक्षात्कारको क्रममा प्रयास गर्ने क्षणहरूको पुनरुत्थान गर्यो।
"तीन या चार महिनाको लागि, मेरो टाउको केवल सही ठाँउमा थिएन, यो टाउको हिँड्छ कि टाउको हो। शल्यक्रिया पछि 15 दिनको लागि, जबसम्म मैले उनलाई सुधार गर्न थालेन, मैले फुटबलको साथ प्रशिक्षण गर्न वा केही गर्न चाहन्नँ। मैले सधैं अस्पतालों देखि घृणा गरेको छु र तिनीहरूबाट बच्न प्रयास गरें, तर त्यसबेला मलाई त्यहाँ हुनुपर्दछ र म साँच्चै शान्त हुन संघर्ष गरिरहेको थिएँ "।
थप बोल्दै, उहाँले बताउनुभयो कि उनले प्रयास गर्ने क्षणमा लगभग फुटबललाई पराजित गरे।
म्याटियो अब अझ राम्रो छ र हाम्रो परिवार अझ भन्दा बढी एकजसो लाग्छ। हो, मैले छोडेर सोधेँ। फुटबल त्यतिबेला मेरो प्राथमिकता थिएन। तपाईं आफ्नो छोरा को धेरै जिन्दगीको साथ देख्नुहुन्छ, उहाँले तपाईंलाई धेरै प्रश्न सोध्नुभएको छ र यो उहाँलाई किन भइरहेको छ ... र मेरो कुनै जवाफ थिएन। प्राथमिकताहरू ती समयमा परिवर्तन गर्दछ। अब म आफैलाई भन्छु कि म भाग्यमानी छु। मैले गरेको गरेको सबै कुरा हृदयबाट आएको छ। "
तथापि, म्याटिटो बरामद गरी विकासले आफ्नो बुबालाई धेरै खुशी ल्यायो जसले सोध्न सकेन कि उनको 2017 सेरी ए पदक उनको छोरा द्वारा पहने।
Leonardo Bonucci Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -आक्रमणकारीले आक्रमण गरे
बोनुसीले आफ्नो परिवारको रक्षा गर्दा एक हतियार प्रयास गरे जब सशस्त्र लुटकाहरूले उनको सामना गरेकी छिन्, उनको श्रीमती र उनको त्यसका पाँच-महिनाको छोरा अक्टोबरमा 2012 मा।
आयोजित भए तापनि, उनले एक फौज मध्ये एक को पंच गर्न को लागि जब उनि एक घडी को इकट्ठा गर्न बाहिर पुग्यो त्यो डिफेंडर देखि मांग को।
तथापि, उनीहरूको सहयोगीसँग मोटरसाइकिसीहरूमा गल्लीहरू बहादुर रक्षकद्वारा सडकको पछि लागेपछि मोटरसाइकल चलाए।
Leonardo Bonucci Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -व्यक्तिगत जीवन
बोक्ची व्यावहारिक र राम्रो हुन्छ। उहाँ कसैलाई हुनुहुन्छ जो हालका वर्षहरूमा उनीहरूको फुटबलको चमकमा देखेर आफ्नो श्रमको फल फसलको माया गर्नुहुन्छ। अझ त्यसोभए, उनी परिवारको प्रेम र उनकी पत्नीबाट सुन्दरताको घिमिरे हुनु आवश्यक छ।
यो आफ्नो निजी जीवन संग सम्बन्धित, बोनुसी हो जसले सबै आफ्नो इन्द्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा स्पर्श र स्वाद बुझाउँछ। उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, सम्बन्ध जटिलता, र कुनै पनि प्रकारको असुरक्षामा अचानक नकारात्मक परिवर्तनहरू नमनपराउनुहुन्छ। असुरक्षा पल पछि लागे पछि महसूस भयो।
उनको कमजोरीको सन्दर्भमा, बोनुकी जिद्दी हुनसक्ने, अधिकार र असम्भव हुन सक्छ। सबै भन्दा माथि, उहाँ एक विश्वसनीय, धैर्य, व्यावहारिक, समर्पित र जिम्मेदार व्यक्ति हुनुहुन्छ।
Leonardo Bonucci Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -On-Pitch Personality
बोनुसी, जसले आफैलाई संसारमा सर्वोत्तम रक्षकहरूको रूपमा स्थापना गरेको छ उनको नेतृत्व कौशलको लागि कडा रूपमा प्रशंसा गरिएको छ।
उनी प्राकृतिक उपस्थितिको रूपमा वर्णन गरिएको छ जसले उनीहरूको उपस्थिति संग टीम चलाउँछ। यो मिलान कप्तान को रूप मा उनले मिलान को लागि हस्ताक्षर गरे पछि उनको तत्काल घोषणा मा स्पष्ट थियो।
उनको नेतृत्वको प्रयासको अझै थप मान्यताले उनलाई उनको सेरी ए क्लब, जुभ्नेस र यसको राष्ट्रिय टोलीको इटालीको कप्तान गर्न मौका पायो।
Leonardo Bonucci Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -फिक्सिंग आरोप मिलाउनुहोस्
बोनीकी, ज्युनेसस टोलीको साथमा, म्यानेजर एन्टोनियो कन्टई, साथसाथै अन्य अन्य खेलाडीले मई 2012 मा मिलान-फिक्सिंगको आरोप लगाए।
उनीहरूले 3-3 मई 2010 मा Udinese विरुद्ध आकर्षित फिक्सिंग मा विशेष गरी जटिल रूपमा हुने आरोप लगाएको थियो, यदि 2011-12 इटालियन फुटबल घोटाला अनुसन्धानको समयमा दोषी भेट्टाउन सम्भावनाले तीन-एक-अर्ध वर्षको बाधालाई सामना गर्यो।
बोनुसी, तथापि, गैरकानूनी कार्य दोषी दोषी छैन र पछि त्यस वर्ष पछि अगस्त मा Pepe को अधिग्रहण गरियो।
Leonardo Bonucci Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -उपनाम पछिको कारण
बोनुको उपनाम "Beckenbonucci"इटालियन प्रेस द्वारा जो यसको रक्षात्मक क्षमताओं को तुलना को तुलना famous German player and manager François (Franz) Beckenbauer.
यद्यपि फ्रान्जले एक डिफेंडरको क्षमतामा फुटबल खेलाएको थियो, उनले उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता पाए जुन उनका देश (पश्चिम जर्मनी) ले देखाएको थियो 1974 मा विश्व कप जित्न।
समान क्षमताहरू र सम्भावनाहरू लियोनार्डो बोन्नीमा पत्ता लगाएका छन् जुन पहिलो पटक डब गरिएको थियो Beckenbauer before an appropriate name “Beckenbonucci” was developed.
Leonardo Bonucci Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -केवल एक शर्ट नम्बर होइन
जबकि अन्य फुटबलर संख्याहरु लाई पहनते छ जो फील्ड मा आफ्नो भूमिका चित्रण मा चित्रण गर्छन संख्या मा 19 लियोनार्डो बोनुसी शर्ट मा भूमिका र असाइनमेंट देखि बाहिर जान्छ। 2016 मा एक प्रेस ब्रीडिंग को समयमा बोलते हुए, बोक्ची ले उनको संख्या न केवल उनको परिवार को लागि संख्या 19 को महत्व को रोक दिए:
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो लियोनार्डो बोक्की बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्याङ्क पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.
डिसेम्बर 31, 2017